ZTF ukwakha inqubo - China Shijiazhuang Zhongtai Pipe
I. Kuyini ZTF?
ZTF uhlobo lobuchwephese ukwakha akhiwa Zhongtai Inkampani ngo-2005, lapho ugxile nobuchwepheshe obuphambili bezokuphepha esusela ezifuywayo international, bese uhola "Ubuchwepheshe Innovation Award" yi-China Cold Owenza Steel Association.
1) Akudingeki ukushintsha isikhunta e ukuwohloka kwesigaba, ukulondoloza ngu-60% yezindleko emiqulwini
2) Roll ekushintsheni isikhathi uyanqunywa kakhulu, ukubhidlika kwesigaba ayidingi ukushintsha isikhunta futhi nje ulungise kulungile. Futhi kungaba usike phansi esikhiqiza isikhathi.
3) Ukukhishwa zabasebenzi umfutho.
4) Roll ukwakha ubuchwepheshe, ubukhulu ihlukile futhi propitious ngoba X70, N80 steel strip.
5) strip steel siphazamisekile futhi beared ngaphezulu okunengqondo, ukunciphisa deda phakathi strip kanye roller, futhi kuncishiswe imfucuza roller.
6) Kulula ukubuyisela futhi ulungise roller.
II. Is ZTF esetshenziswa kuphi?
Rolls e Ukubhidlika kwesigaba
Sebenzisa Ngokuyinhloko Evamile
Sebenzisa Evamile ngokugcwele
Izungezisa Rolls ovundlile
Ayikho Rolls ovundlile
Ngesandla ulungise ligijima, ukuvulwa & lokuvala futhi nokuphakamisa imiqulu engenhla, imiqulu ephansi uvula; uvala ku kushaft. Ukuzisethela ukukhululwa esheshayo noma amacansi adjustable.
Electric ulungise ligijima, ukuvulwa & lokuvala futhi nokuphakamisa imiqulu engenhla, tilting imiqulu aphansi opeing & ukuvala phezu izihlalo roll. Electric ulungise isikhala phakathi imiqulu okuyinto ilawulwa isikulufa.
Electric ulungise ligijima, ukuvulwa & lokuvala futhi nokuphakamisa imiqulu engenhla. Ikhompyutha ulungise Itshekisela yezincwadi aphansi uvula; uvala phezu izihlalo roll, isikhala phakathi imiqulu okuyinto ilawulwa isikulufa
Sakhiwo wokuLungiswa Swiveling Kuqondile Rolls
Lawula ngesandla i-ukulungisa kuvulwa & closeing, ephakamisa futhi ligijima we ekhethekile ijika imiqulu.
Ngesandla noma electromotion ukulawula ukulungiswa kuvulwa & lokuvala, ephakamisa futhi ligijima we ekhethekile ijika imiqulu.
isilawuli Electric ukulungisa kuvulwa & closeing, ephakamisa futhi ligijima we ekhethekile ijika imiqulu.
ukulawula Computer ukulungisa kuvulwa & closeing, ephakamisa futhi ligijima we ekhethekile ijika imiqulu.
Ukulungiswa Ezinye Rolls e Cishe Owenza Isigaba
Ama-roller kufanele kuthathelwe indawo lapho esikhiqiza usayizi entsha ipayipi.
Imiqulu ovulekile futhi zivalwa mhla ka-Shaft, ukuzisethela ukukhululwa esheshayo kanye amacansi adjustable, bephakamisa imiqulu engenhla.
Imiqulu ovulekile futhi zivalwa mhla ka-shaft noma roll izihlalo, ukuzisethela isikhala phakathi imiqulu okuyinto ilawulwa isikulufa, bephakamisa imiqulu engenhla.
Imiqulu ovulekile futhi zivalwa mhla ka-shaft noma roll esihlalweni. Electric ulungise isikhala phakathi imiqulu okuyinto ilawulwa isikulufa. Ikhompyutha ulungise bephakamisa imiqulu engenhla.
Micro-ukulungiswa yedivayisi Side Kuqondile Rolls e Final Owenza futhi Sizing Isigaba
Ukulungiswa for Rolls Isikhundla
Isicelo Control Electronic
Ukunemba Rolls Isikhundla Ukulungiswa
Ukusebenza Site ka Rolls isikhundla Ukulungiswa
Deformation we Pipe Edge elingenalutho
I Ukwakhiwa High Rrecision, High Steel Ibanga kanye Ukuqina Wall Pipe
Isikhathi Ukumiselela Rolls
isikhathi Iposi: May-29-2018
Ashiselwe Pipe Ukwenza Machine Abanikezeli
Engagqwali Isigaxa ukwakha umshini ugingqe